Uyenza njani ihlobo elingenakuba lukratshi kwaye engathathi ntweni!
Ukusukela ekuqaleni kwehlobo, eyona ntloko iphambili ye-fairies enjengam engayeki ukulandela ubuhle isusa i-makeup yabo ehlotyeni, ngakumbi xa ukwakheka kushushu kwaye i-makeup inyibilika. Emva kwesiqingatha seyure sokwenza izinto ngokunzulu, iba yinto enkulu epeyintiweyo ...
I-3 Imilebe yomlomo ekulungeleyo ukulungela ihlobo, uBuhle buyalila!
Umahluko kwimvakalelo "enzima" yasekwindla nasebusika, ihlobo phantse "liyayihlaziya" ukuqala, kwaye ukwakheka kukwayinto elula yokukhanya kunye nokwenza izinto elubala. Kodwa akukhathaleki ukuba icace gca kangakanani into yokuqaba, ukusebenzisa into yokuqaba umlomo linyathelo eliyimfuneko kubantu abaninzi. ...
Yenza iiFayile ezi-4 zoBuso beLiso, iLiso elinye eliKhulu lanele!
Ndiyakholelwa ukuba ubuhle abaninzi banolu hlobo lwenkathazo. Uninzi lwezithunzi zamehlo ezininzi ziyamangalisa xa ujonga kuqala. Emva kokubeka i-odolo ngokungxamisekileyo, bafumanisa ukuba abanandlela yakuqala. Ekugqibeleni, ikamva labo linokuncitshiswa kuphela ekukhetheni uthuthu olunzulu kwidrowa ....
Uyifaka njani i-makeup, yenze lula kwi-5 amanyathelo
ngomphathi ku 20-12-26
Inyathelo 1: Isithambisi sokuthambisa ukwenza ubugcisa. Ubushelelezi, ulusu olongezelelekileyo sesona sixhobo sakho. Ukufezekisa oku kufuneka uthambise. Hlamba ubuso bakho emva koko uthambe ngokukhululekileyo, unike ulusu lwakho imizuzu embalwa yokufunxa into yokuthambisa okanye ukutshiza. Inyathelo 2: iPrimer Primer inceda ukulungiselela ulusu lwakho ...
Ungayikhetha njani i-eyelashes elungileyo kubume bamehlo akho?
ngomphathi ku 20-12-23
Abantu abaninzi badidekile malunga nendlela yokwazi iimilo zabo zamehlo kunye nendlela yokukhetha i-eyelashes efanelekileyo. Apha ngezantsi kukho intshayelelo eneenkcukacha kunye neengcebiso zesalathiso sakho. I-Kalocils Ubuhle ihlala inikezela ngemivumbo elungileyo ebubuxoki. ...
Uyenza njani ilogo yakho yabucala, inkqubo yokwenza ngokwezifiso yobungcali igcina ixesha lakho kunye nomzamo. 1, Thumela ifayili yelogo ye-logo ngokwezifiso, nceda uthumele iifayile ze-logo kwi-AI okanye kwifomathi yePDF. Ifayile yelogo ecacileyo inokusinceda ukuba sibonise ngcono ukuprinta kwelogo xa kuprintwa. Ndi ...
Ungasifaka njani isicelo seEyelashes zobuxoki, eyona ndlela ilula yokwenza ukuba amehlo akho akhanye kunye nobuqaqawuli
ngomphathi ku 20-12-07
Ungayifaka njani i-eyelashes yobuxoki, indlela elula yokwenza amehlo akho akhanye kunye nobukhazikhazi 1, Zilungiselele ukunxiba iinkophe zobuxoki. Bamba umtya wokukroba uye elisweni lakho ukujonga ubude obufanelekileyo ukuba bungabi bude kakhulu, obuya kuba bubi ...
Izinga lokukhula kweentengiso zentengiso ngo-Okthobha laliphindwe kathathu ngokuthelekisa ixesha elifanayo kunyaka ophelileyo, iyonke i-28.1 yezigidigidi zeYuan, ukonyuka kwe-18.3% ngonyaka-ngonyaka
Nge-16 ka-Novemba, i-National Bureau of Statistics yakhupha idatha ebonisa ukuba ngo-Okthobha, intengiso iyonke yokuthengiswa kwempahla yabathengi kwilizwe lam yayiyi-3,857.6 yezigidigidi ze-yuan, ukonyuka konyaka-nge-4.3%, kunye nenqanaba lokukhula yayiyipesenti ye-1.0 ngaphezulu kwenyanga ephelileyo. Phakathi kwabo, i-t ...
Umgangatho ophezulu wemveliso yokuhombisa uvela kuphando oluqhubekayo kunye nophuhliso kunye nokubeka iliso kumgangatho kunye nolawulo. INanchang Weiti Technology Co, Ltd.yinkampani eyahlukeneyo yokuthambisa edibanisa ukukhula kwemveliso, imveliso kunye nentengiso ekwi-Intanethi. Ukubambelela kumgaqo wobumbano we “Q ...
I-eyelashes yobuxoki kwizinwele zezilwanyana kunye neenwele ezingezizo, yeyiphi engcono kuwe?
1, Izinwele zezilwanyana Iinwele zezilwanyana zenziwe ngeenkophe ezingezizo kwizinwele ezikhutshwe kwizilwanyana. Xa kuthelekiswa ne-eyelashes yefayibha, iyamdaka ngakumbi, kodwa ngenxa yokuba inwele ekhutshwe kwizilwanyana, iyafana kakhulu neenwele zomzimba womntu, eneoyile encinci. Inomdla wokukhanya. Iinwele ezahlukeneyo zezilwanyana ...
Olu luhlobo lweKalocils Buhle oluvela eNanchang Weiti Technology Co, Ltd ekhethekileyo ekuveliseni iinkophe zobuxoki, i-eyeliner, i-lip gloss, eyeshadow, i-mascara njl njl. I-Kalocils Beauty brand yasekwa ngo-2019, kodwa sineeminyaka eli-10 yokuvelisa ubuhle kunye nokuthumela ngaphandle amava.Ngoku, sine-3000 yemitha yokusebenzela kunye nabasebenzi abazinzileyo abangaphezu kwe-100. Ixabiso lethu lonyaka lokuthumela ngaphandle lingaphezulu kwe-US $ 3000,000. Ndiyathemba ukuba singasungula ubudlelwane beshishini lwexesha elide kwaye senze ukuba inzuzo yethu ifezekiseke.
Imivimbo yamehlo, iinkophe zobuxoki, mink imivimbo, Izandiso zeEyelash, Abathengisi bee-Eyelash, eyeliner,